ICallies iphule izinhliziyo kwabe-All Stars idlulela phambili kwiNedbank Cup - Impempe
ICallies iphule izinhliziyo kwabe-All Stars idlulela phambili kwiNedbank Cup
UKlye Peters weCape Town All Stars egximfa ibhola bebhekene nePretoria Callies koweNedbank Cup
IPretoria Callies izame kwaze kwalunga emdlalweni we-quarterfinal yeNedbank Cup lapho ishaye khona iCape Town All Stars ngo ngo 5-4, sekukhahlelwa amaphenathi eKapa.
ICallies ibilokhu ilandela ngemuva kulo mdlalo obekubukeka sengathi uzowinwa yiqembu lasekhaya ngaphandle kokuthi uze uye esikhathini esengeziwe namaphenathi.
I-All Stars iyona ebithola isikhathi esiningi ebholeni futhi bekulokhu kuyiyona ebibukeka iyingozi uma iya phambili. Ngomzuzu wesikhombisa kucishe kwathela izithelo ezinhle ukudlala kahle kwayo kodwa unozinti weCallies wavimba amabhola amabi amabili abefuqwe kuyena. Iphinde yabuya futhi i-All Stars kodwa waphinde walivimba uLesu ibhola ebelikhahlelwe uRonaldo Maarman ngomzuzu ka-17.
Ibilokhu idlala kahle i-All Stars nokuthe ngumzuzu ka-33 uWasees Isaacs washaya igoli yahamba phambili. Uthole ibhola waqonda ngqo kunozinti uLesu, ophume emapalini kodwa u-Isaacs wamdlula washaya igoli sekungekho muntu emapalini. ICallies nayo iwatholile amathuba ayo kodwa yangawasebenzisa ngendlela. Ithuba elihle kunawo wonke lehlele u-Atusaye Nyondo ngomzuzu ka-41, ozame ukungqofa ibhola kodwa uKyle Peters walibona walichithela ngaphandle.
Isiwombe sesibili siqale kuyiCallies ebizama igoli lokulinganisa kodwa langavuma Igugu leKapa emizuzwini yokuqala kulesi siwombe. Nokho ngomzuzu ka-69 kugcine konakele njengoba uPogiso Mahlangu eshaye igoli lokulinganisa kwabanga ngu 1-1. Kubukeke sengathi iCallies ilibale ukujabulela igoli lokulinganisa njengoba kuthe ngomzuzu ka-71 uPule Maraisane washaya igoli laphinde lahamba phambili Igugu leKapa.
Ngalesi sikhathi umdlalo ubusuvulekile kucaca ukuthi noma yiliphi iqembu lingadlulela kweyandulela eyamanqamu. Emizuzwini yokugcina iCallies ibihlasela kakhulu ifuna igoli lokulinganisa, futhi ibisivunwa wumoya. Ngomzuzu ka-89 kugcine kulungile njengoba u-Edwin Sitayitayi, owake wadlalela iKaizer Chiefs, eshaye igoli lokungilanisa kwaba ngu 2-2. Kuphoqeleke ukuthi umdlalo udlulele esikhathini esengeziwe.
Ngesiwombe sokuqala sesikhathi esengeziwe iCallies ishaye ipali kabili esesele uPeters. Bonke abadlali bese bebukeka bekhathele futhi behlaselwa amajaqamba. Sekusele imizuzu eyisishiyagalombili kuphele umdlalo u-Aupa Moeketsi uthole ikhadi elibomvu ngokudlalisa kabi uDillan Solomons. Lokhu kwenze ukuthi ihlasele ngamandla i-All Stars. Nokho kugcine kuyiwe kumaphenathi kwadlula iCallies ngo 5-4.
Previous Previous post: AmaProteas akhale emuka nochungechunge eshaya i-India
Next Next post: ITshakhuma imangaze iLeopards emdlalweni weNedbank Cup